Wararka Maanta: Axad, Jun 10, 2018-Kakuma oo lugu qabtay bandhigii ugu horreeyay ee TEDx
Axad, June, 10, 2018 (HOL) – Xerada qaxootiga Kakuma ee dalka Kenya oo ay ku noolyihiin bollaal Soomaali ah ayaa lugu qabtay bandhiga caalamiga ah TEDx ,waxaana marti ku ahaa oo guulaha ay nolasha ka gaareen ku soo bandhigay dad horey usoo marey nolasha qaxootinimo.
Bandhiga Sabtidii oo inta la ogyahay noqonaya midkii ugu horreeyay ee lugu qabto xero qaxooti, waxaa lugu soo bandhigay tusaalooyin wax-tar u noqon kara qaxootiga,dadkii hadallada jeediyay oo u badnaa dad kusoo barbaaray qaxootinimo waxaa ay soo bandhigeen sheekooyin ku saabsan dhibaatooyinkii ay noolasha kasoo mareen iyo waxyaabaha ku qasbey inay soo barakacaan, kuna nooladan xeryo qaxooti.
Inta uu socday bandhiga dadka aadka loo xiiseynayay sheekooyin nolashooda ku saabsan waxaa ka mid ah gabadha da'yarta ah ee caanka ku ah xayeysiinta dharka ay xirtaan dumarka Islaamka, Xaliima Aadan ah oo kusoo barbaartay xerada qaxootiga ee Kakuma balse dib u dejin ka heshay Mareykanka. Xaliima oo Soomaali ah waxaa ay si aad ah uga sheekeysay caqabadaha ku hareereysan dumarka qaxootiga iyo in sida looga bixi karo dhibaatooyinkaasi ay tahay in wax la baro dumarka.
Kakuma waxaa fursad u siiyay in lugu qabto bandhigaan caalamiga ah waxaa lugu sheegay xerada inay martigalisay oo ay ku noolyihiin qaxooti ka yimid meelo kala duwan , qoymiyad ahaanna ku kala duwan -waana sababta bandhiga dadka ka hadlay ay uga mid ahaayeen qaxooti kale oo kasoo kala jeeda dalalka Koonfurta Suudaan iyo DRC Congo, kuwaasi oo ka shekeeyay dhibta ay collaadu ku reebtay noolashooda iyo markii ay yimaadeen qaxootiga sida ay uga guul gareen noolasha.
Hadallada bandhiga laga jeediyay waxaa ay dhammaan dhiirrigalin u ahaayeen qaxootiga oo lugu booriyay in noolasha qaxootinimada laga bixi doono,balse ay ku dadallaan waxbarashada carruurta oo gabdhaha ay ka mid-yihiin.
Kaliya dadka qaxootiga horey usoo marey bandhiga kama aysan hadlin ee waxaa ka mid ahaa saraakiil sare oo ka kala socday bangiga adduunka, hay'adaha kala duwan ee Qaramada Midoobay iyo dowladda Kenya,iyagoo sharraxay horumarka ay qaxootiga ku tallaabsan karaan, marka tusaalooyinka la arki karo ee ay soo qaateen waxaa ka mid ahaa qaxooti badan oo horumar gaaray, kuwaas oo ay kamid yihiin Xaliima Aadan oo caan ku ah xayeysiinta dharka iyo nin kale oo qaxooti ah oo guul ka gaaray ciyaarihii Olympikada ee Brazil lagu qabtay.
Bndhiga TEDx waa madal la isku waydaarsado aragtiyo kala duwan ayna khudbado ka jeediyaan dad nolosha guulo ka gaaray, si ay dadka ugu sheegeen in ay caqabado soo mareen kana gudbeen, qof kastana uu sidaa yeeli karo haddii uu dadaalo.